Sensitive skin ပိုင်ရှင်လား ? ညအိပ်ရာမဝင်ခင် ဒီအဆင့် (၄) ဆင့်ကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ - For her Myanmar
ယောင်းရဲ့အသားအရေက နေရောင်ထဲထွက်လိုက်တာနဲ့ နီမြန်းလာတယ်၊ ဝက်ခြံတွေထွက်လာတယ်၊ ယားယံလာတယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းက sensitive skin ပိုင်ရှင်ပါ။ Sensitive skin ပိုင်ရှင်အများစုက ကိုယ်သုံးတဲ့ skincare product တွေကို သေချာရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့လိုပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်တဲ့ပစ္စည်းပါဝင်တာနဲ့ အလာဂျီဖြစ်ပြီကိုး။ ဒါပေမဲ့ ဈေးကြီးတဲ့ skincare တွေသုံးတိုင်းလည်း သိသိသာသာမပြောင်းလဲသွားဘူးဆိုသူတွေအတွက် ညအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ ဒီအဆင့်တွေကို ဂရုတစိုက်လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အမြုပ်မထွက်တဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးတွေ ရွေးဝယ်ပါ။ မျက်နှာကို ညင်ညင်သာသာသစ်ပြီး တစ်မိနစ်လောက် နှိပ်နယ်ပေးခြင်းက မျက်နှာရဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနုနုလေးနဲ့ သုတ်ပေးပါနော်။
Related Article >>> skincare တွေထဲမှာ ထိရောက်မှု အရှိဆုံးလို့ဆိုတဲ့ Cosmedical product ဆိုတာ ?
(၂) Eye cream သုံးပါ။
မျက်လုံးအနီးတစ်ဝိုက်က အရေပြားက မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာ အပါးဆုံးနဲ့ ထိခိုက်အလွယ်ဆုံးပါ။ အထူးသဖြင့် sensitive skin ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပေါ့။ Eye cream ကို toner သုံးပြီး moisturizer မလိမ်းခင်မှာ သုံးပေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
(၃) Mositurizer လိမ်းပါ။
အသားအရေက ညဘက်မှာပိုပြီး ထိခိုက်လွယ်တယ်ဆိုတာ ယောင်းတို့သိပြီးပြီလား ? ဒါကြောင့် ညဘက်တွေမှာ အိပ်ရာမဝင်ခင် moisturizer ကို နေ့ဘက်မှာထက် ပိုထူထူလေးလိမ်းပေးရပါမယ်။ အရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ စိမ့်ဝင်အောင် လက်နဲ့ပုတ်လိမ်းပေးဖို့လည်း မမေ့နဲ့ဦးနော်…
Related Article >>> Niacinamide က အသားအရေအတွက် ဘာကြောင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာလဲ?
(၄) လေကို သန့်စင်အောင်ထားပါ။
နည်းနည်းရှုပ်သွားလား ဒီလိုပါ sensitive skin ပိုင်ရှင်တွေက လေထုထဲမှာ ပါလာတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေ၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့် အရေပြားပြဿနာတွေ ဖြစ်လာရတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေကုန်ပင်ပန်းလာတဲ့ အသားအရေလေးကို ညဘက်မှာ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းက ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ယောင်းရဲ့အခန်းထဲမှာ air filter တပ်ထားသင့်ပါတယ်နော်..
ကဲ … ဒီအဆင့်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ မနက်အိပ်ရာထလာတိုင်း နူးညံ့တဲ့အသားအရေလေးကို ပိုင်ဆိုင်နေရမှာ အမှန်ပါပဲ။
ယောငျးရဲ့အသားအရကေ နရေောငျထဲထှကျလိုကျတာနဲ့ နီမွနျးလာတယျ၊ ဝကျခွံတှထှေကျလာတယျ၊ ယားယံလာတယျဆိုရငျတော့ ယောငျးက sensitive skin ပိုငျရှငျပါ။ Sensitive skin ပိုငျရှငျအမြားစုက ကိုယျသုံးတဲ့ skincare product တှကေို သခြောရှေးခယျြဝယျယူဖို့လိုပါတယျ။ ဓာတျမတညျ့တဲ့ပစ်စညျးပါဝငျတာနဲ့ အလာဂြီဖွဈပွီကိုး။ ဒါပမေဲ့ ဈေးကွီးတဲ့ skincare တှသေုံးတိုငျးလညျး သိသိသာသာမပွောငျးလဲသှားဘူးဆိုသူတှအေတှကျ ညအိပျရာမဝငျခငျမှာ ဒီအဆငျ့တှကေို ဂရုတစိုကျလုပျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
အမွုပျမထှကျတဲ့ မကျြနှာသဈဆေးတှေ ရှေးဝယျပါ။ မကျြနှာကို ညငျညငျသာသာသဈပွီး တဈမိနဈလောကျ နှိပျနယျပေးခွငျးက မကျြနှာရဲ့ သှေးလညျပတျမှုကို အားကောငျးစပေါတယျ။ ပွီးရငျတော့ မကျြနှာသုတျပုဝါနုနုလေးနဲ့ သုတျပေးပါနျော။
Related Article >>> skincare တှထေဲမှာ ထိရောကျမှု အရှိဆုံးလို့ဆိုတဲ့ Cosmedical product ဆိုတာ ?
(၂) Eye cream သုံးပါ။
မကျြလုံးအနီးတဈဝိုကျက အရပွေားက မကျြနှာတဈခုလုံးမှာ အပါးဆုံးနဲ့ ထိခိုကျအလှယျဆုံးပါ။ အထူးသဖွငျ့ sensitive skin ပိုငျရှငျတှအေတှကျပေါ့။ Eye cream ကို toner သုံးပွီး moisturizer မလိမျးခငျမှာ သုံးပေးတာ အကောငျးဆုံးပါ။
(၃) Mositurizer လိမျးပါ။
အသားအရကေ ညဘကျမှာပိုပွီး ထိခိုကျလှယျတယျဆိုတာ ယောငျးတို့သိပွီးပွီလား ? ဒါကွောငျ့ ညဘကျတှမှော အိပျရာမဝငျခငျ moisturizer ကို နဘေ့ကျမှာထကျ ပိုထူထူလေးလိမျးပေးရပါမယျ။ အရပွေားအတှငျးပိုငျးအထိ စိမျ့ဝငျအောငျ လကျနဲ့ပုတျလိမျးပေးဖို့လညျး မမနေဲ့ဦးနျော…
Related Article >>> Niacinamide က အသားအရအေတှကျ ဘာကွောငျ့ မရှိမဖွဈလိုအပျတာလဲ?
(၄) လကေို သနျ့စငျအောငျထားပါ။
နညျးနညျးရှုပျသှားလား ဒီလိုပါ sensitive skin ပိုငျရှငျတှကေ လထေုထဲမှာ ပါလာတဲ့ ဖုနျမှုနျ့တှေ၊ ဓာတုပစ်စညျးတှကွေောငျ့ အရပွေားပွဿနာတှေ ဖွဈလာရတာ မြားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တဈနကေုနျပငျပနျးလာတဲ့ အသားအရလေေးကို ညဘကျမှာ လထေုညဈညမျးခွငျးက ကာကှယျနိုငျဖို့အတှကျ ယောငျးရဲ့အခနျးထဲမှာ air filter တပျထားသငျ့ပါတယျနျော..
ကဲ … ဒီအဆငျ့တှကေို မှနျမှနျကနျကနျလိုကျနာမယျဆိုရငျတော့ မနကျအိပျရာထလာတိုငျး နူးညံ့တဲ့အသားအရလေေးကို ပိုငျဆိုငျနရေမှာ အမှနျပါပဲ။
Tags: Beauty, problems, sensitive skin, skin, skincare, Solutions, tips